वडाध्यक्ष नै वैदेशिक राेजगारमा:कठै देशकाे हालत ! «
वडाध्यक्ष नै वैदेशिक राेजगारमा:कठै देशकाे हालत !
प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०७५, सोमबार १६:११
संखुवासभा । देशमा राेजगारीकाे अवस्था कस्ताे छ भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन । लाखाै युवा विदेशमा अाफ्नाे श्रम बेचिरहेका छन् । हुँदा हुँदा देशकाे मुहार फेर्न र देशलार्इ समृद्ध बनाउने अभियानसँगै राजनीतिमा हाेमीएका युवा समेत विदेशिएका छन् । खाँदबारी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।
५ नं.वडाका अध्यक्ष बमहादुर घले वैदेशिक रोजगारमा दक्षिण कोरिया गएको एक वर्ष वितेको छ । वडा अध्यक्ष घलेले नगरपालिका कार्यालयमा एक निवेदन समेत दर्ता गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिका कार्यालयमा वडा अध्यक्ष घलेले घरायसी कामका कारण घरबाहिर जानु पर्ने भएकाले आपूम कार्यालयको काममा उपस्थित हुन नसक्ने पत्र दिएका बताइएको छ ।
उनको पत्रमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी वडा सदस्य श्यामप्रसाद निरौलालाई दिएका छन् । कार्यवाहक निरौलाका अनुसार आपूम्लाई वडा अध्यक्ष घलेले काम गर्ने जिम्मेवारी पत्र दिएकाले सो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको बताए । तर वडा अध्यक्ष घले घरयासी कामका लागि नभई वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा दक्षिण कोरिया गएको रहस्य खुलेको हो ।